interest rate(interest rate) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
माघमा पनि बढाएनन् बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माघ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएनन्। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आज माघ महिनाका लागि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माघमा पनि पुसकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपतर्फ ३...
वाणिज्य बैंकहरुले माघमा पनि ब्याजदर नबढाउने, विकास बैंक र फाइनान्सले के गर्लान् ?
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले माघमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन्। बैंकहरुले माघमा पनि पुसकै ब्याजदरलाई लागू गर्ने सहमति गरेको एक बैंकरले जानकारी दिए। ‘ब्याजदरका विषयमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको बैठक बसेको थियो, बैठकमा माघमा पनि पुसकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने औपचारिक सहमति भएको छ’, ती बैंकरले भने, ‘ब्याजदर बढाए पनि...
पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएनन् ब्याजदर
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएका छैनन्। उनीहरुले मंसिरमै लागू गरिएको ब्याजदरलाई पुसमा यथावत राखेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र फाइनान्स कम्पनी एशोसिएसनका पदाधिकारीबीच पुसमा ब्याजदर नबढाउने...
अधिकांश बैंक/वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर डबल डिजिटमा, कसको कति ?
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाएर डबल डिजिटमा पुर्याएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी आज निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर डबल डिजिटमा पुर्याएका हुन्। ब्याजदरका...
ब्याजदर युद्धले बैंकको निक्षेप बढेन, रु. १४ अर्बले घट्यो
काठमाण्डौ । ब्याजदर युद्धले वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप बढ्नुको सट्टा घटेको देखिएको छ। कात्तिकमा लागू हुने गरी बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए। तर, २ दिन बित्न नपाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ बुँदे सर्कुलर जारी गरेपछि बैंकहरुको ब्याजदर युद्ध अन्त भएको थियो। कात्तिक १ र २ गते अत्याधिक ब्याजदर बढाउने बैंकको निक्षेप बढे...
काठमाण्डौ । बैंकिङ उद्योगको जाइन्ट बैंक नवील बैंक लिमीटेडले समेत संसोधित ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । नवील बैंकले बुधबार अबेर राति आफ्नो वेबसाइटमार्फत संसोधित ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । संसोधित ब्याजदरअनुसार नवील बैंकले ३ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ९.३६ प्रतिशत तोकेको छ । क्युमिलेटिभ...
एनआइसी एशियामा बचत खाता खोल्दा बैंकिङ उद्योगकै धेरै ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको ३ बुँदे सर्कुलरपछि अधिकांश बैंकहरुले निक्षेपतर्फ अन्धाधुन्ध बढाएको ब्याजदरमा संसोधन गरेका छन् । अधिकांशले संसोधित ब्याजदर आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ९.३६ प्रतिशत कायम गरेका छन् भने संस्थागत मुद्दति निक्षेपको...
एनआइसी एशियाको ब्याजदर पनि सिंगल डिजीटमा सीमित, बचतको अधिकतम ७% कायम
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडले पनि निक्षेपको ब्याजदर सिंगल डिजीटमै झारेको छ । वाणिज्य बैंकका सीइओहरुबीच भएको सहमति र नेपाल राष्टबैंकको निर्देशनअनुसार एनआइसी एशिया बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९.३६ प्रतिशत कायम गरेको हो । यसअघि कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने हिसाबले बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर...
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंकले संसोधित ब्याजदर प्रकाशित गरेको छ । बैंकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत संसोधित ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । यो बैंकले मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.३६ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । हिमालयन बैंकले पनि ९.३६ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गरेको थियो । बंगलादेश बैंकमा ३ महिनादेखि ६ महिना अवधिसम्मको...
काठमाण्डौ । कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत हाराहारी पुर्याएको हिमालयन बैंकले नयाँ दर सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्टबैंकको ३ बुँदे निर्देशनपछि हिमालयन बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । हिमालयन बैंकमा अब मुद्दति निक्षेप राख्दा अधिकतम ९.३६ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर पाइनेछ । यस्तै, संस्थागत...
विकास बैंकले गरे ब्याजदरमा सहमति: मुद्दतिमा ९.५% र बचतमा ४.५% दिने
काठमाण्डौ । विकास बैंकका सीइओहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदरको विषयमा सामूहिक समझदारी कायम गरेका छन् । विकास बैंकका सीइओहरुबीचको छलफलले यस्तो समझदारी कायम गरेको हो । उनीहरुले मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.५ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी नयाँ दर सार्वजनिक गर्ने सहमति गरेका हुन् । यस्तै, बचतमा न्यूनतम ४.५ प्रतिशत ब्याजदर दिने उनीहरुबीच...
१५ बैंकको नयाँ ब्याजदर: हिमालयन, बंगलादेश र सिद्धार्थको १०% माथि, अरुको कति ?(सूचीसहित)
काठमाण्डौ । केन्द्रीय बैंकले प्रणालीमा तरलता अधिक रहेको दाबी गरे पनि बैंकहरुले भने निक्षेप तानातानको रेसलाई छाडेका छैनन् । असोज १ गतेदेखि सुरु भएको यो रेस र यसमा एकअर्कालाई टप्न थालिएको ब्याजदर युद्ध कात्तिकमा झनै चर्किने देखिएको छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिक १(आज)देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक...
लक्ष्मी बैंकले पनि मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ११.०५% पुर्यायो
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेड पनि ब्याजदर वृद्धिमा आक्रामक देखिएको छ । यो बैंकले पनि मुद्दति निक्षेपमा एनआइसी एशिया बैंक नजिकको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको हो । आज प्रकाशित नयाँ दर अनुसार लक्ष्मी बैंकले ३ देखि ६ महिने अवधिको व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ११.०५ प्रतिशत कायम गरेको छ। ६ महिनादेखि २ वर्ष अवधिको मुद्दति...
ब्याजदर वृद्धिमा एनआइसी आक्रामक: बचतकै ब्याजदर ८.१०%, मुद्दतिको ११.१०% पुग्यो
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंकले मुद्दति निक्षेपकै ब्याजदर ११.१० प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकले बचत खाताको ब्याजदर समेत बढाएर ८.१० प्रतिशत पुर्याएको छ । कात्तिक १ गते(आज)देखि लागू हुने गरी प्रकाशित नयाँ ब्याजदरअनुसार बैंकले असोजको तुलनामा ह्वात्तै वृद्धि गरेको हो । व्यक्तिगततर्फको मासिक निक्षेप खाताको ब्याजदर असोजको तुलनामा २.५...